Izindatshana zikaDan Pantelo ku Martech Zone |
Imibhalo nge Dan Pantelo
U-Dan uyisikhulu sezobuchwepheshe kwezokukhangisa kanye nomsunguli/i-CEO ye I-Marpipe. Ngaphambi kokusungula i-Marpipe, u-Dan wethula i-Marpipe yezokuthengisa ephuma egumbini lakhe lokulala ekolishi, eyashintsha yaba i-ejensi ekhula ngokushesha ezinze e-Soho, e-Manhattan egxile ekukhiqizweni nasekufuneni amabhizinisi e-DTC. I-Marpipe yaqalwa yasungulwa ngenkathi i-ejensi ingena enkingeni ngokuhlolwa kokudala, futhi namuhla, iMarpipe inyuse ngaphezu kuka-$10m ekuthandweni kwe-Adobe, Samsung, kanye nabaphathi e-Buzzfeed, Hubspot, MediaMath, naseCriteo.
Iminyaka eminingi, abakhangisi nabakhangisi bancike kudatha eqondiswe kuzithameli ukuze bazi ukuthi bangaqalisa kuphi futhi phambi kobani ubuciko babo besikhangiso. Kodwa ukugudluka kwakamuva kwemikhuba yokumba idatha ehlaselayo - umphumela wemithetho emisha nedingekayo yobumfihlo ebekwe yi-GDPR, CCPA, kanye ne-Apple's iOS14 - kushiye amaqembu ezentengiso eklolodela. Njengoba abasebenzisi abaningi bephuma ekulandeleni umkhondo, idatha yokukhomba izethameli iba ncane futhi ingathembeki. Imikhiqizo ehamba phambili emakethe